आफुलाई भन्दा आफ्नालाई धेरै माया गर्छन यि ४ राशी हुनेहरू ! – Online Khabar 24
मिथुन राशी : यो श्रेणीमा सबैभन्दा पहिलो नाम छ मिथुन राशी को ।
मिथुन राशी भएका मानिसहरु यदि आफ्नो कुनै योजना बनाउँछन्, उनीहरु निकै उत्साहित हुन्छन् र सिधै यसको निष्कर्षमा पुगेको सपना देख्न थाल्छन् ।
उनीहरु आफ्ना साथी र आफ्ना लागि निकै ठूल्ठूला सपना देख्ने गर्दछन्, जुन थुप्रै पटक पूरा गर्न मुश्किल हुन्छ।समस्या : तर यदि कुनै कारणवश ती सपनाहरु पूरा नभए उनीहरुलाई निकै तनाव लाग्छ । उनीहरु आफ्नो जीवनसाथी बिना वा उनीहरुबाट टाढा भएर केही पनि सोच्नै सक्दैनन् ।
उनीहरु तपाईंलाई आफ्नो शत प्रतिशत दिने गर्दछन् र तपाईंबाट पनि यसैको अपेक्षा गर्दछन् । कर्कट राशी भएकाहरु पूर्ण रुपमा आफ्ना पार्टनरमाथि निर्भर हुन्छन् ।उत्कृष्ट जीवनसाथीः घुम्न जान होस् वा कुनै सपिङका लागि ।
आफ्ना साथी बिना उनीहरुको कुनै योजना बन्दैन । उनीहरु आत्मनिर्भर भइकन पनि आफ्ना साथीप्रति निर्भर हुन्छन् । उनीहरुलाई हरेक समय आफ्ना साथीसँग बस्न मनपर्छ । उनीहरु निकै उत्कृष्ट जीवनसाथी हुनेछन् ।
कन्या राशी : कन्या राशी भएकाहरुलाई निकै लचिलो मानिन्छ । उनीहरु तपाईंको जीवनमा आइपर्ने कुनै पनि समस्याको अगाडि झुक्दैनन् ।यसको साटो उनीहरु यसको डटेर सामना गर्दछन् । यदि उनीहरु कुनै सम्बन्धमा छन् भने आफ्नो शत प्रतिशत दिने गर्दछन् । उनीहरुका लागि प्रेमीभन्दा ठूलो अरु कोही पनि हुँदैन ।
निकै क्लिंगी : उनीहरुको ध्यान कहिले पनि आफ्नो प्रेमीभन्दा बाहिर हुँदैन त्यसकारण उनीहरुलाई निकै क्लिंगी मानिन्छ । प्रेमीले के खाइरहेको छ, कोसँग छ, के खाइरहेको छ, कहिले सुत्छ, कहिले उठ्छ । यी सबै कुराको जानकारी हुनुपर्छ । यो स्वभावका कारण उनीहरुको सम्बन्ध धेरै लामो समय टिक्न पाउँदैन ।
कुम्भ राशी : कुम्भ राशी भएकाहरुले जसलाई आफ्नो जोडी बनाए, बुझ्नुहोस् ती व्यक्तिलाई उनले जीवनभर साथ दिनेछन् । उनीहरु कुनै पनि हालतमा आफ्नो साथीसँग टाढा भएर बस्न सक्दैनन् । जोसँग उनीहरु भावनात्मक रुपले जोडिन्छन् ती व्यक्तिप्रति सधैं इमान्दार हुन्छ र उनीहरु बिना आफ्नो जीवनको अर्थ देख्दैनन् ।
मीन राशी : जुन प्रकारको सम्बन्ध मीन राशी भएका व्यक्तिहरुले आफ्ना पार्टनरसँग राख्छन् त्यो अरु कसैले पनि राख्न सक्दैनन् । उनीहरु आफ्ना साथीको विषयमा निकै केयरिङ र भावुक हुने गर्दछन् । उनीहरुका लागि संसारमा सबैभन्दा महत्पूर्ण व्यक्ति प्रेमी, प्रेमिका वा जीवनसाथी हुन्छन् ।
जान्नुहोस् कि कुन राशिका मानिस हुन् जो निकै भाग्यशाली हुन्छन्…..वृष राशि :राशि चर्क्रको दोस्रो राशि हो वृष राशि। यस राशिका स्वामी हो शुक्र ग्रह। स्वामी शुक्र ग्रहको प्रभाव सँधै यी राशिका मानिसमा रहन्छ। यस राशिका मानिसहरु सुन्दर, आकर्षक र कुनै पनि कलाको सद्गुणी हुन्छन्।
वैदिक ज्योतिषमा शुक्र ग्रहलाई सुख, धन, वैभव र ऐश्वर्यको कारक मानिन्छ। वृषभ राशिका मानिसहरूलाई सँधै भाग्यको साथ मिल्ने गर्छ। यस राशिका मानिसहरूलाई कहिल्यै पनि धनको अभाव हुँदैन।
कुम्भ राशि : कुम्भ राशिको स्वामी हो शनि ग्रह। शनिलाई न्यायका देवता मानिन्छ। शनिको प्रभावका कारण कुम्भ राशिका मानिस पनि न्यायप्रमी हुन्छन्। यस राशिका मानिस कसैसँग पनि गलत व्यवहार गर्दैनन्। कुम्भ राशिका मानिसमा समाज कल्याणको भावना पनि हुन्छ। संवेदनशीलता, आकर्षक स्वभाव, दृढ इच्छाशक्ति, न्याय, दूरदर्शिता, र राम्रो मार्गदर्शकको गुणले यस राशिका मानिसलाई उत्तम लिडर बनाउँछ। यो खबर साभार गरियको हो ।
Prevकस्तो सपनाको कस्तो फल मिल्छ ? जान्नुहोस् १७३ सपना र सपनाको फल !
nextअमेरिकाको क्यालिफोर्निया बस्ने भन्दै युवाहरूसँग सम्बन्ध बढाउने नेपाली युवती !